Patch sy labels vita amin'ny tenona manokana
Ny paty sy ny laboaly tenona namboarina dia iray amin'ireo mpivarotra sy vokatra feno indrindra amin'ny fampiasana azy sy ny endrika lamaody. Izy ireo dia tena marobe ary azo ampiarahina amin'ny kitapo, kiraro, satroka, kilalao, fiara, fanaka sy fitafiana ao anatin'izany ny akanjo ivelany, atin'akanjo sns. Ny iray amin'ireo mo ...
Lanyard namboarina manokana
Ny fehin-kibo sy ny lanyard dia fahita eo amin'ny fiainana andavanandro, toy ny fehy amin'ny vozona ho an'ny mpiasa birao, mpianatra & mpianatra lanyard amin'ny seho ara-barotra, fehikibo valizy, kofehy medaly, fatorana alika & vozon'akanjo, tady fohy misy carabiner, tady finday, tady fakan-tsary, fehin-kibo, charg ...
Fehim-borona sy vozon'akanjo alika maharitra
Ny alika no sakaiza mahatoky indrindra an'ny zanak'olombelona ary ankehitriny dia maro ny fianakaviana manana alika iray farafaharatsiny. Ho an'ny tompona alika vaovao, ny tsy maintsy ananana dia ny sakafo alika, fandriana ahazoana aina, avy eo ny fehy. Na inona na inona taona na haben'ny alikao dia ilaina ny mandeha an-tongotra. Noho izany ianao ...
Ny lanyard avo lenta dia tokony ho safidy laharam-pahamehana ho anao amin'ny fampisehoana badge, tapakila na kara-panondrom-pirenena amin'ny hetsika, asa ary amin'ny fikambanana, ary iray amin'ireo zavatra fampiroboroboana trendiest erak'izao tontolo izao. Ny lanyard dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro toy ny fehin-tànana, tavoahangy ...
Disney nahazo fankatoavana mpanamboatra Patch
Miaraka amin'ny fironana (tena malaza) lavitry ny fanjifana lamaody haingana, nitombo ny fangatahana entana tsirairay sy tany am-boalohany. Indraindray, rehefa mahita paty peta-kofehy tsara tarehy eo amin'ny lamba ianao dia tsy maintsy gaga amin'ny asa tanana manahirana azy. Izahay no mpanamboatra tsara indrindra anao ...